Shina: Ny Sandan’ny Fitetezana Habakabaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2011 5:00 GMT
Kihondalana amin'ny hazakazaka hitety habakabaka indray ny fandefasan'i Shina tamin'ny herinandro lasa ny Tiangong-1 tobin-danitra azo onenana, iray amin'izay tokony atahoran'ny rehetra. Indrindra fa ny Aziatika mpiara-dia amin'i Etazonia, mazava?
Iray amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'izany filazana izany i Jiang Feng, tonia lehiben'i gazety miteny shinoa any Japana Taranaka-Shinoa-Vaovao Ampitan-dranomasina; ao amin'ny lahatsoratra iray tamin'ny bolongana [zh] tamin'ny fiandohan'ny herinandro no nijereny ny fomba nitateran'ny fampitam-baovao Japoney ny fandefasana [ny zanabolana] , napetrak'i Jiang fa ny tena nandrisika an'i Shina tamin'ity resaka habakabaka ity dia ny fahitana tsotra fa manambola noho ny ankamaroan'ny firenena hafa izy ahafahany mitety [mitrandraka] ny habakabaka.
Tao anatin'ny foibe fandefasana zanabolana tao Jiuquan. Saripika AAxanderr via Wikimedia Commons, lasan'ny rehetra.
Nandresy lahatra ihany koa i Jiang fa ho amin'ny tombontsoan'ny olombelona rehetra ny fitetezana ny habakabaka, na natao hampifanandrina ny karazana engineering [fahaiza-manao] Shinoa nahatonfa ny fifandonan'ny fiaran-dalamby tamin'ny volana jolay amin'ny fahambonian'i Japan eo amin'ny robotika sy ny sehatry ny teknolojian'i fitetezana habakabaka.
Hoy ny nosoratany:
Amin'izao fotoana izao dia hitantsika ny fisalasalan'ny fampitam-baovao tandrefana [momba ny fikasantsika amin'ny habakabaka], eny fa na dia asongadin'i gazetim-panjakana aza fa “tsy hanova ny heviny mikasika ny fampiasana ny habakabaka ho amin'ny fandriampahalemana satria manko manana tobin-danitra manokana [i Shina].” Raha tenenina amin'ny fomba hafa, nampafana ratsy an'i Etazonia, Rosia ary ny firenena hafa nanoloana ny zavabitan'i Shina eo amin'ny sehatry ny fitetezana ny Habakabaka. Fa ny firenena tena mahatsapa ho poritra indrindra dia tsy iza fa ilay mpifanolo-bodirindrina amin'i Shina: Japana.
Notaterin'ny fampitam-baovao Japoney malaza rehetra ny fahombiazan'i Shina nandefa ny Lapan-Danitra 1.
Raha jerena akaiky ireny fampitam-baovao ireny, hitantsika ny fifantohan'ny Daily Yomiuri tamin'ny nandefasan'i Shina ny toby an-habakabaka mialoha indrindra ny Fetim-Pirenena hananan'ny olona aingam-panahy sy hananan'ny firenena rehareha; Ny Mainichi Daily News kosa nifantoka tamin'ny filazana fa manana ny toby an-habakabaka manokana avokoa ny firenen-drehetra, saika ny ankamaroany dia nahatratra izany dingana izany tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny firenen-kafa, fa i Shina kosa no firenena nahatontosa izany tamin'ny ezaka manokana nataony, tamin'ny alalan'ny “haitaony manokana”; Navoitran'ny The Tokyo Shimbun fa an-dalan'ny ho “fahefana an-habakabaka goavana” i Shina; Sankei Shimbun, mandritra izany fotoana izany mitatitra ny anaran'ny foibe fandefasana sy ny “ady” eo amin'ny Mongolia anatiny sy ny faritanin'i Gansu milaza fa tao anatin'ny sisintaniny no toerana nandefasana ny sambondanitra; Noraisin'ny Asahi Shimbun kosa ny filazana fa miezaka ny manatratra ny tombondalana azon'i Etazonia sy Rosia eo amin'ny sehatry ny fitetezana habakabaka i Shina, ary andalam-pisongonana ny hafa [fisosososoana] amin'ny fombany.
Mampahery kosa amin'ny ankapobe ny tatitra avy amin'ny Nikkei, izay tsy nametraka ny tantara eo amin'ny voalohan'ny pejy ihany, fa eo amin'ny halalin'ny fitantarana hita ao amin'ny pejy faha-14. Nampiaiky volana ny fanadihadiana, manavoitra etsy andaniny ny ahiahin'ny gazety Japoney sy Tandrefana milaza fa “Mitady hanjakazaka eny an-habakabaka i Shina ankehitriny” nefa mandritra izany fotoana izany miahiahy fandrao mampiasa ny habakabaka amin'ny sehatra ara-tafika i Shina rahatrizay. Voasoratra ao ihany koa ny fampisongadinan'ny fampitam-baovao fa i Shina irery no firenena mahafantoka ny tetibolam-pireneny amin'ny fampiasam-bola ara-stratejika, fa ny ambaratonga samihafa mitranga any amin'ny firenena tandrefana no tsy ahafahan'ireo voatonona farany mahavita tahaka izany, nefa ny fampivelaran'i Shina toby an-habakabaka azo onenana dia tarihin'ny Tafi-Panafaham-Bahoaka.
Mazava ankehitriny hoe nahoana ny fampahalalam-baovao Japoney no nifidy ny hamoaka ity vaovao ity. Eo amin'ny sehatry ny fitetezana ny habakabaka, tratra aorian'i Shina hatrany i Japana. Na dia amin'izao fotoana izao aza, tsy vitan'ny hoe mifanara-kevitra ny mponin'i Japana raha eo amin'ny fandaharan'asan'ny firenena amin'ny sehatry ny habakabaka, fa na dia i Japana ilay fanjakana aza nanadino ity lohahevitra ity ho manana ny lanjany ara-stratejia. Izay, angamba, ny antony nahatonga ny praiminisitra, Yoshihiko Noda, nankany amin'ny mpanao lalàna tany Japana vao haingana teo hanonta“Lalàna Fototra” ho an'ny Oniversa, milaza fa io no mety ho fanombohan'ny drafitra “zato-taona” ho an'i Japana. Raha jerena anefa ny fikorosofahan'ny toekarena sy ny fanarenana vokatry ny fihovotrovotry ny tany, raha manapa-kevitra ny hampiasa vola avy amin'ny fitondrana i Japan hananganana toby an-habakabaka azo onenana, dia tsy ho mora velively ny fanatanterahana izany.